जागिरे श्रीमानका बेरोजगार श्रीमतीका पीडा! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/जागिरे श्रीमानका बेरोजगार श्रीमतीका पीडा!
पात्र १. ‘भन्छन् नि कुकुरको काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन मेरो जिन्दगी त्यस्तै छ। बाहिर देख्दा घरमै बस्ने त हो नि के काम छ र ? भन्नेजस्तो देखिन्छ आफूलाई भने एकैछिन फुर्सद हुँदैन’ , एक जना हाकिमकी श्रीमतीको गुनासो।केही काम परेर कहिलेकाहीँ श्रीमानको अफिसमा जाँदा उनलाई निकै खिन्न महशुस हुँदो रहेछ। घर नजिकै रहेछ अफिस। श्रीमानको केही सामान घरमा छुटे,उनैले पुर्याउने रहेछिन्।
एकदिन, श्रीमानको फाइल घरमै छुटेछ। उनले श्रीमतीलाई फाइल ल्याउन भनेछन्। जब अफिस पुगिन् हाकिम साबकी श्रीमती भनेर सबैले चाहिनेभन्दा बढी सत्कार गरेछन्। उनैलाई अप्ठ्यारो हुनेगरी।एकपटकको घटनाले भने उनको मनमा धेरै दिनसम्म बिझिरह्यो।अफिसको पेनड्राइभ घरमै बिर्सेछन् श्रीमानले, श्रीमतीलाई ल्याउन भने। जब अफिस पुगिन्, एक जना स्टाफले हाकिमलाई सोधे ‘सर म्याडम कुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ? श्रीमतीको मनमा चिसो पसिहाल्यो।
उनले सोचिन्, बेलैमा पढ्न पाएको भए त म पनि यो ठाउँमा हुन्थे होला नि ….। तर श्रीमानले नमज्जाले जवाफ फर्काए।‘कुनै जागिर सागिर गर्दिनन्। उनको अफिस घर जेजे भने पनि त्यही एउटा घरमात्रै हो। उनको कुनै काम छैन बस् घरमा बस्ने मात्र हो’।
यी सब कुरा सुनेपछि श्रीमती फनक्क घर फर्किइन्।त्यो घटनाले निकै सतायो उनलाई। बाटोमा मनभरि कुरा खेल्न थाले।‘जागिर गर्ने भन्दा घरमा धेरै काम हुन्छ नि। जागिर जानेले घरमा के हेर्नुपर्छ र! छोराछोरी, सासूससुरा,नन्द, भान्जी सबैको खानादेखि लुगा धुने जिम्मा,घरमा पाहुना आए सत्कार गर्ने जिम्मा, घरमा सरसफाइ गर्ने। के यी काम अफिस जानेको भन्दा बढी छैन र? बस् घरमै बस्ने मात्र हो रे ? अरूको अगाडि कसरी भन्न सकेका।
पात्र २. तीन छोरा छोरीकी आमा अफिस जाँदिनन्। उनलाई हरेक दिन उतिकै चटारो हुन्छ। हरेक दिन बिहान चार बजे उठेदेखि रातिको दश बजेसम्म मुश्किलले एक दुई घण्टा मात्र आराम पाउँछिन् उनले।
लकडाउन अघिनै उनले आफ्नो पीडा सुनाएकी थिइन्। अहिले पो निषेधाज्ञा खुकुलो छ। स्कुलहरूले अनलाइन क्लास चलाएका छन्।
तर लकडाउनअघि त उनलाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो। बच्चालाई स्कुलको लागि तयार गर्न। त्यसपछि श्रीमानको लागि सब कुरा ठीक्क पारिदिनुपर्थ्यो। अलि ढिला भयो कि डाँको छोड्न थाल्थे।
घरको सरसफाइ, बच्चा स्कुलबाट आएपछि उनी स्याहारसुसार गर्दा दिन गएको पत्तै हुँदैन।
‘एकछिन ढाड सोझो नपारी काम गर्दा पनि घरको काम देखिँदैन। मेरो मात्रै समस्या होइन जागिरे श्रीमानका बेरोजगार श्रीमतीहरूको साझा पीडा हो यो?’
आयआर्जन गरिने काम मात्रै काम होइन, आर्जित रकमलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने काम झनै महत्वपूर्ण हो।
पैसामा मात्रै हरेक कुराको तुलना गरिनु हुँदैन। पैसाकै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी पारिश्रमिक यी प्रतिनिधि पात्र जस्ता महिलाहरूको हुनुपर्ने हो।
तर किन रातदिन घर परिवारकै लागि भनेर मरिमेट्दा पनि उनीहरूको कामको मूल्यांकन हँदैन ?
मेरी श्रीमती गृहणी होइनन् घरकी असल व्यवस्थापक हुन् भन्ने आँट जागिरे श्रीमानमा कहिले आउला?
पहिले आफ्नो सोच बदल्नु जरूरी छ। कामको मूल्यांकन घर होस् या अफिस दुवै ठाउँमा हुनुपर्छ।
गृहणी भन्ने परम्परागत परिभाषा परिमार्जन हुनु जरूरी छ। अमौद्रिक काममा रातदिन घोटिने आम महिलाहरूको सम्मानजनक परिचय हुनुपर्छ-गृह व्यवस्थापक।
भोलीदेखि विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा लिने